အယ်ဖိုး: January 2011
ကျွန်တော်တို့ ဒီ Application လေးသုံးပြီး Drive တွေကို Check လုပ်ရအောင် ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာမှာ လိုအပ်တဲ့ Driver တွေကို သူက ဖေါ်ပြပေးမယ် ပြီးရင် Download လုပ်သွားပေးလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် Install လုပ်လိုက်ရုံဘဲ သိပ်ကောင်းပါတယ်။ Serial Key ပါ တခါတည်း ထည့်ပေးထားပါတယ်။
Posted by Peace at 9:00 PM0comments Links to this post
Facebook ၏ Email ၀န်ဆောင်မှု အသစ်ရရှိနေပြီဖြစ်
အများမှ မျှော်လင့်စောင့်စားပြီး တစ်ကယ်ဖြစ်မဖြစ် စောင့်ကြည့်ခဲ့ရသော Facebook ၏ Email ၀န်ဆောင်မှု အသစ်အား ယခုရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ၀န်ဆောင်မှုအသစ်မှာ မိမိ Facebook အကောင့်ရှိ Messages၊ Chat နှင့် Text တို့အားလုံးအား ပေါင်းစပ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း စစ်ဆေးလို့ရရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် Messages များကို ခွဲခြားပေးတဲ့ အတွက် မည်သည့် Messsage အမျိုးအစားဟု လိုက်လံ မှတ်သား ထားစရာ မလိုတော့ပဲ တစ်နေရာထဲတွင် ကြည့်ရှုလို့ ရရှိသွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Facebook Messages များဟာ လတ်တလော လူသုံးများလျှက်ရှိသော Gmail၊ Hotmail နှင့် Yahoo mail တို့နှင့်လည်း အဆင်ပြေစွာ အသုံးပြုသွား နိုင်ပါတယ်။ လူအများမှ အဆိုပါ အသုံးပြုနေကျ mail များကို အသုံးပြုပြီး မိမိ၏ Facebook mail အား mail ပို့ပါက မိမိ ၏ Message box ထဲသို့ရောက်ရှိနေမည် ဖြစ်ပြီး၊ မိမိမှလည်း အဆိုပါ mail များကို mail ပို့ပါက Facebook Message အသွင်ဖြင့် ရောက်ရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် mail အတွင်း မိမိ၏ Facebook Profile ပုံ၊ နာမည် နှင့် Message တို့ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Facebook မှ အာမခံထားတာကတော့ တစ်ခြား Mail များ၏ Address မှာ ပြောင်းချင် ပြောင်းသွား နိုင်သော်လည်း ၄င်းတို့၏ @Facebook.com မှာတော့ ဘယ်တော့မှ ပြောင်းလဲ သွားမှာ မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားထားပါတယ။်
Facebook ၏ Email ၀န်ဆောင်မှု အသစ်ကို ရယူလိုပါက Message ဆိုတဲ့နေရာလေး ကို ၀င်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းအသုံးပြုနေကျ လူများ ကိုတော့ Facebook မှ Notification ပြထားမှာပါ။ ထို့နောက် Message ထဲ ရောက်ပါက အပေါ်တွင် Claim Your Facebook Email ဆိုတာကို နှိပ်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက် Facebook မှ မိမိ၏ Profile Name ကို အလိုအလျှောက်စစ်ဆေးပေးကာ ရရှိနိုင်မည့် နာမည်ကို ရွေးချယ်သွား စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Facebook မှ ပေးသော နာမည်ကို မကြိုက်ပါကလည်း မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ နာမည်ကို ပေးသွား နိုင်ပါတယ်။
ထို့အတွက်ကြောင့် example@facebook.com ဆိုတဲ့ Email Address အသစ်တစ်ခု ကိုရယူကာ တရားဝင်သုံးစွဲ နိုင်ပြီ ဖြစ်ပြီး mail ပို့လိုပါကလည်း message ပို့သည့်အတိုင်း new message ကို နှိပ်သွားရမှာ ဖြစ်ကာ To နေရာတွင် မိမိ ပို့လိုသော Mail အကောင့်ကို ရိုက်ထည့်ရင်း ပို့သွား နိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Posted by Peace at 11:18 AM0comments Links to this post
Apple မှ iPhone5အား ၂၀၁၁ခုနှစ် အစောပိုင်း ကာလများ တွင် ထုတ်လုပ်သွားဖွယ် ရှိ
Apple မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အတွင်း ထုတ်ကုန် အသစ် အဖြစ် iPad2ကို ထုတ်လုပ် သွားမည် ဟု ကြော်ငြာ ထားခြင်း ကို လူအများ မှ စိတ်ဝင်စား နေကြပါတယ်။ ထိုသို့ စိတ်ဝင်စား နေသော အချက်များ မှာiPad2ဟာ အရင် iPad ထက် ပိုမို ပါးလျသွားနိုင်မည်၊ ပိုမို မြန်ဆန်စွာ အလုပ်လုပ် သွားနိုင်မည် နှင့် Camera များ ပါဝင်လာနိုင်သည် ဆိုသော အချက်တွေကို ကြော်ငြာထားခြင်း ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း အများမှ သတိမထားမိသော အချက်မှာ Apple မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အတွင်း iPad2တစ်ခု ထဲ မဟုတ်ပဲ iPhone5ကိုလည်း ထုတ်လုပ်သွား မှာ ဖြစ်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ အဆိုအရ Apple မှ ၄င်း၏ ကုန်ပစ္စည်း အသစ်များ ကို June လပိုင်းတွင်သာ အများထံသို့ မိတ်ဆက်ပြသလေ့ ရှိသဖြင့် iPhone5ကိုလည်း Apple မှ June လ အတွင်း ထုတ်လုပ် သွားနိုင်ကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။
အဆိုပါ သတင်းများ ကို ခိုင်လုံကြောင်း သက်သေပြ နေသော အချက်မှာ မကြာသေးမီကာလအတွင်း Apple မှ ၄င်း၏ ထုတ်ကုန်များ အတွက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း နေရာတွင် Foxconn ကုမ္ပဏီအား ထည့်သွင်းထားပြီး Foxconn ပိုင် Foxlink မှလည်း iPhone5အတွက် earphone များ စတင်ထုတ်လုပ် နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းများမှ ဆိုထားပါတယ်။
ထပ်မံကာ သတင်းများအရ Apple မှ iPhone5အတွင်း ၄င်း၏ CPU အသစ်ဖြစ်သော A5 CPU ကိုထည့်သွင်း သွားမှာ ဖြစ်ပြီး ၄င်း processor ဟာလည်း multi-core processor ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ သော CPU သာမက Apple မှ iPhone5အား Graphic အနေဖြင့် ၄င်း၏ dual-core အသစ်ကို ထည့်သွင်း သွား မှာ ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ dual-core ထည့်သွင်း ထားခြင်းဖြင့် iPhone5အတွင်း 1080p video recording ကိုရရှိသွားမှာ ဖြစ်သလို output video ၏ အရည်အသွေးမှာလည်း HDMI ဖြစ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် Apple မှ ယခု အခါ iOS 4.3 ကို beta ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ကြောင့် ၄င်း၏ version အပြည့်အစုံ ကိုလည်း iPhone5အတွင်း ထည့်သွင်းသွား နိုင်ပြီး Apple မှ Feature အသစ်ဖြစ်သော Media Streaming ကို ရရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Media Streaming ၏ အကျိုးကျေးဇူးကတော့ iPhone5မှ တစ်ဆင့် Social Networking များကို လွတ်လပ်စွာ သုံးစွဲခွင့် ရရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအား ဖြင့် Photo Gallery များ ဆောက်ထားရုံ သက်သက် မဟုတ်တော့ပဲ တစ်ခြားလူများ ၏ iPhoto ကိုလည်း Comment ပေးသွားနိုင်ခြင်း၊ subscribe လုပ်သွား နိုင်ခြင်း စသဖြင့် Social Networking နှင့် ဆိုင်သော Feature များကို ရရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Features များသာမက iPhone4နှင့် ကွဲလွဲသော ဒီဇိုင်းကိုလည်း ထုတ်လုပ် သွားဖွယ်ရှိပြီး နောက်ဆုံး အနေဖြင့် Mac အသုံးပြုသူများ မှာ နောက်ဆုံး OS ဖြစ်သော Mac OS X Lion ကို တင်ထားပါက iPhone5နှင့် ပါ ချိတ်ဆက် အသုံးပြု သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Posted by Peace at 2:21 PM0comments Links to this post
Nitendo 3DS အား ထုတ်လုပ် မည့်ရက်အား Nitendo မှ တရားဝင် ကြေငြာ
Nitendo 3DS ကို Nitendo ကုမ္ပဏီ မှ ထုတ်လုပ်မည် ဟု ကြော်ငြာ ခဲ့ခြင်း မှာ ကြာမြင့် ခဲ့ပြီ ဖြစ်သော်လည်း တကယ်တမ်း ထုတ်လုပ် ချိန်မှာတော့ အတော်လေး ကို အချိန်ယူ ခဲ့ရပါတယ်။
Nitendo 3DS အား လွန်ခဲ့သော အပတ်မှ ကျင်းပခဲ့သည့် CES (Cosumer Electronic Show) တွင် ထုတ်ဖော် ပြသခဲ့ ပြီး ထူးခြားသော အချက်မှာတော့ 3D နည်းပညာကို အထူးအလေးပေး ထားခြင်းပဲ ဖြစ်ပြီး 3D မျက်မှန် မလိုသော မျက်နှာပြင် ကို အသုံးပြု ထားခြင်း ကြောင့် လူအများ မှ စိတ်ဝင်စား ခဲ့ကြပါတယ်။
Nitendo 3DS အတွင်း 3D settings များ ကို လိုအပ်သလို ပြောင်းလဲ သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး မျက်မှန် မလိုသော အချက်ကတော့ နောက်ထပ် ထုတ်လုပ်သွားမည့် Game Console များ၏ မျိုးဆက်သစ် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Battery သက်တမ်း မှာ 3D effects များ ဖွင့်ထားပြီး ဂိမ်းကစား မည် ဆိုပါက ၃ နာရီ မှ ၅ နာရီ အထိ သက်တမ်း ခံနိုင်ရည် ရှိမှာ ဖြစ်ပြီး 3D effects များ မပါဝင် ပါက ၈ နာရီ အထိ သက်တမ်း ကြာမြင့် အောင် အသုံးပြု လို့ရနိုင်ပါတယ်။
Nitendo 3DS တွင် 2GB SD card ပါဝင်သွားမှာ ဖြစ်သည့်အတိုင်း DS နှင့် DSI ဂိမ်းများ ကိုလည်း အလွယ် တကူ Download ချကာ ကစားသွား နိုင်မှာ ပါ။ အရောင် အား ဖြင့် အပြာရောင် နှင့် အနက် ရောင် ဖြစ်ပြီး ၄င်း၏ d-pad တွင်တော့ analog mini-stick တစ်ခု ကို အသစ်ထပ်မံ ထည့်သွင်း ပေးထားပါတယ်။
ထို့အပြင် ယခင် DS နှင့် DSI များတွင် ပါဝင်နေကျ A/C cable အစား Battery အားသွင်း လို့ ရနိုင်သော Charging Dock မှာ လည်း တစ်ပါတည်း ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်ပြီး အထူးခြား ဆုံးကတော့ Camera နှစ်လုံး ပါဝင်မှာ ဖြစ်ကာ အဆိုပါ Camera များမှာ 3D နည်းပညာ ကို အထောက်အပံ့ ပေးထား နိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုလောလောဆယ် တွင် Nitendo 3DS အား ဂျပန် နိုင်ငံ တွင်သာ ဖြန့်ချီရန် စီစဉ်ထားလျှက် ရှိပြီး US တွင် တော့ March လ 27 ရက် နေ့မှသာ ဖြစ်ချီသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
ဈေးနှုန်းမှာ ဒေါ်လာ 250 ကျသင့်သွား မှာ ဖြစ်ပြီး Nitendo မှ ထုတ်လုပ် ထားသည့် ဂိမ်းမဟုတ်သည့် third-party ဂိမ်း 10 မျိုးကျော် နှင့် Nitendo မှ ထုတ်လုပ် ထားသည့် ဂိမ်း7မျိုးကို ကစား သွား နိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Posted by Peace at 10:07 PM0comments Links to this post
Microsoft ၏ OneNote application အား iPhone ပေါ်တွင် အသုံး ပြုနိုင်ပြီ
Microsoft မှ ၄င်း၏ Application တစ်ခု ဖြစ်သော OneNote အား iPhone ပေါ်တွင် အသုံးပြု နိုင်ရန် ထုတ်လုပ် လိုက်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ထူးခြား တဲ့ အချက် ကတော့ အဆိုပါ OneNote အား iPhone ပေါ်တွင် အသုံးပြုရန် အခမဲ့ Download ယူခွင့် ပေးထားသော်လည်း Download ယူခွင့်ပေးထားသော အချိန်ကန့်သတ် ထား ပါတယ်။
OneNote အား Microsoft မှ Windows Phone7ပေါ်တွင် လည်း အသုံးပြုသွား မှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပြီး OneNote မှာ iPhone အတွင်း notes များ မှတ်သား သွားနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့ အပြင် iPhone မှ ရိုက်ယူ ထားသော ဓါတ်ပုံများ နှင့် မိမိ မှတ်သား လိုသည်များ ကို တစ်ပေါင်း တစ်စည်း တည်း မှတ်သွား နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် OneNote မှ တစ်ဆင့် Microsoft ၏ Windows Live Sky Drive ကိုလည်း ချိတ်ဆက် သွား နိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် မိမိ Windows Desktop Appliction များ ကိုလည်း ချိတ်ဆက်သွား နိုင်မှာ ပါ။
ကျွမ်းကျင်သူများ မှတော့ ယခု လို Microsoft မှ Apple ၏ iPhone အတွက် Application တစ်ခု ထုတ်လုပ်ပြီး နောက် မည် သည့် Apple ကုန်ပစ္စည်းများ ပေါ်တွင် Microsoft ၏ Application လုပ်မည် ကိုစောင့် မျှော်နေကြ ပြီး ခန့်မှန်းချက် များ အရ Apple ၏ iPad ပေါ်တွင်လည်း Application များ ပေါ်ပေါက်လာ နိုင်ကြောင်း ကော်လဟာလ များထွက်ရှိ နေပါတယ်။
ယခု ထုတ်လုပ် လိုက်သော OneNote application အား Microsoft Mac developer များ နှင့် OneNote အင်ဂျင်နီယာများ က ပေါင်းစည်း ထုတ်လုပ် ခြင်းဖြစ်ပြီး ၂ နှစ်နီးပါး အချိန်ယူ ခဲ့ရပါတယ်။
အထက်တွင် ဖော်ပြ ထားသည့် အတိုင်း OneNote အား Free Download ပေးသွားမည် ဖြစ်သော်လည်း ကန့်သတ်ထားသော အချိန်အား Microsoft မှ တရားဝင် ဖော်ပြ ထားခြင်း မရှိ သလို တရားဝင် ရောင်းချ သွားမည့် နေ့ရက် ကိုလည်း အတိအကျ ဖော်ပြ ထားခြင်း မရှိ သေးကြောင်း တင်ပြ လိုက်ရပါတယ်
Posted by Peace at 10:04 PM0comments Links to this post
ကဲ Youtube က သီချင်းလေးတွေကို တိုက်ရိုက်နားထောင်နေရင်း Mozzila Firefox မပါပဲ Player လေးတစ်ခုထဲနဲ့ နားထောင်လို့ရပါပြီဗျာ.. သီချင်းတွေ add/remove နဲ့ repeat လုပ်ချင်လား ကိုယ်နားထောင်ချင်သီချင်းကိုပဲ ရှာချင်သလား သုံးတက်သလောက်အကုန်လုပ်လို့ရပါတယ်။မယ်..တခါလေ ကိုကြည့်ချင်တာလေးကို Firefox မပါပဲ ကြည့်တာ တမျိုးလေး မျက်စိရှင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်.ကျနော် လို သုံးချင်သူ (ဝါသနာတူသူများ )အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ လင့်လေးကနေ Mozzila Firefox add on လေးမှာ Install လုပ်ပြီး Firefox လေး ကို ရီစတတ်ပေးလိုက်တာနဲ့သုံးလို့ရပါပြီ.. ကဲ ကျွန်တော်တို့ ဒီနေရာလေးမှာ သွားပြီး Install လုပ်ရအောင်ဗျာ.... အားလုံးပျှော်ရွှင်ကြပါစေ။
Firefox4အား February လ အတွင်း အပြီးသတ် ထုတ်လုပ် သွားမည်
Web Browser တွင် လူသုံးများ ပြီး ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး ဟု သတ်မှတ်ခြင်း ခံထား ရသော Mozilla Firefox မှာ ယခု အခါတွင် Firefox4အား မကြာမီ လပိုင်းအတွင်း အပြီးသတ် ထုတ်လုပ် တော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း ကြော်ငြာထားပါတယ်။
Mozilla မှ တာဝန် ရှိသူ တစ်ဦး ဖြစ်သူ Damon Sicore မှ ၄င်းတို့ အနေဖြင့် Firefox4အား ခက်ခဲစွာ ပြုပြင် မွန်းမံ ထားပြီး ယခု အခါတွင်တော့ အပြီးသတ် ထုတ်လုပ် ရန်သာ လိုတော့ ကြောင်း ပြောကြား ထားပါတယ်။ ထပ်မံကာ ၄င်းမှ Firefox4အား ပြုပြင်ခြင်းမှာ နောက်ဆုံး အခြေအနေသို့ ရောက် ရှိနေပြီ ဖြစ်သောကြောင့် လူအများမှ ကြိုးစားကာ ပူးပေါင်းပါဝင် သွားရန်လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားထားပါတယ်။
လက်ရှိအချိန် တွင် Firefox4အတွင်း အန္တရယ် ရှိသော bugs ပေါင်း 160 ကျော်ခန့် ရှိနေပြီး ၄င်းတို့ကို ရှင်းပြစ်ရန် ရက်သတ္တပတ် ၆ ပတ်ခန့်လိုအပ်ကြောင်း နှင့် Bugs များ ၏ အရေအတွက် မှာ 100 အောက် ရောက်ရှိ သွားပါက Firefox4အား အပြီးသတ် ထုတ်လုပ် သွား တော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
လာမည့် ရက်သတ္တပတ် အတွင်း Firefox အသင်းမှ ၄င်း Bugs များ ကို ရှင်းလင်း သွားမှာ ဖြစ်ပြီး February လ သို့မဟုတ် လကုန် ပိုင်းတွင် Firefox4၏ final version ကို ထုတ်လုပ် သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Sicore မှ ထပ်မံကာ Firefox4အတွင်း Bugs အရေအတွက် များများ ရှိလေ software မှာ beta အဆင့်ဖြင့်သာ ရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းတို့အနေဖြင့် Bugs အရေအတွက် အား သုည အထိ ဖြစ်ရန် ကြိုးစားနေသော်လည်း Bugs များ ထပ်မံ တွေ့ရှိပါက Firefox4မှာ beta အဖြင့်သာ ရှိနေဦးမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားထားပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့ Bugs များ ရှင်းလင်း နေစဉ် အတွင်း စမ်းသပ် မှုများစွာ ပြုလုပ်သွား မှာ ဖြစ်ပြီး ၄င်းစမ်းသပ်မှု များ အတွင်း တွင်လည်း အသုံးပြုသူ လူများ အားလုံး ကိုပါဝင်သွား စေလိုကြောင်း Firefox မှ တာဝန် ရှိသူများ မှ ပြောကြား ထားပါတယ်။ ၄င်းတို့မှ အသုံးပြုသူများ အနေဖြင့် Firefox အား သုံးနေစဉ် အတွင်း plug-in များ extension များကို လုံဝ မဖြုတ်ပဲ ထားရှိရန် နှင့် Flash သို့မဟုတ် Silverlight တို့ကိုလည်း Disable မပြုလုပ်ပဲ အသုံးပြုသွား စေလိုကြောင်း ပြောကြား ထားပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ် ရခြင်း ၏ အကြောင်း အရင်းမှာ ၄င်းတို့ အနေဖြင့် Firefox Crash ဖြစ်ခြင်း အကြောင်း ကို သိရှိလို ခြင်း နှင့် အသုံးပြုသူ၏ ကွန်ပျူတာ Hardware နှင့် software ကိုက်ညီခြင်း ရှိမရှိ ကိုလည်း သိရှိလိုခြင်း ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
Firefox4အတွင်း Feature အများအပြား ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့ အထဲမှ နာမည်ကြီး Feature ကတော့ မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Website များကို Block ထားနိုင်သည့် Do not Track Feature ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Firefox မှာ လက်ရှိ အချိန်တွင် ဥရောပ တွင် အင်တာနက် လောက ၏ ဈေးကွက် အများဆုံး ရယူထား နိုင်သော Browser ပဲ ဖြစ် ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် တော့ ဒုတိယ ဈေးကွက် အများဆုံး ရယူထား နိုင်ပါတယ်။ ၄င်းအပေါ်တွင် Microsoft ၏ Internet Explore ရှိပြီး ၄င်းအောက် တွင်တော့ Google ၏ နာမည်ကျော် Chrome မှာ အမှီ လိုက်နေကြောင်း ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
Posted by Peace at 10:17 PM0comments Links to this post
မကြာမီ လပိုင်း အတွင်း လက်ရှိ အသုံးပြုနေသော IP v4 အစား IP v6 အား ပြောင်းလဲ သုံးစွဲ တော့မည်
အင်တာနက် ပေါ်တွင် ပေါပြူလာ ဖြစ်ပြီး သြဇာ ကြီးမားသော Website များ ဖြစ်သည့် Google ၊ Facebook နှင့် Yahoo! တို့မှာ အင်တာနက် ချိတ်ဆက် ခြင်းတွင် လက်ရှိ အသုံးပြုနေသော IP v4 အစား IP v6 အား စမ်းသပ် သုံးစွဲ မှုတွင် ပါဝင် သွားရန် သဘောတူညီ ခဲ့ကြပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့ IP v6 အား စမ်းသပ် သုံးစွဲမည့် နေ့ဖြစ်သော 2011 ခုနှစ် June 8 ရက် နေ့အား IP v6 Day ဟု ခေါ်ဆိုသွား ရန် စီစဉ်ထား လျှက်ရှိပြီး အဆိုပါ နေ့အတွင်း ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာ အင်တာနက် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သော Internet Society မှ အထောက်အပံ့ပေး လျှက်ရှိနေသော Network လောက မှ ကုမ္ပဏီ ကြီးများ ဖြစ်သည့် Akamai နှင့် Limelights Network တို့မှ လည်း ပါဝင် အသုံးပြု သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိ ရပါတယ်။
Internet Society မှ တာဝန် ရှိသူ တစ်ဦး ဖြစ်သော Leslie Daigle မှ ၄င်းတို့ အနေဖြင့် IP v6 အား စမ်းသပ် သုံးစွဲ သွားမည် ကို ကြိုဆို ကြောင်း နှင့် IP v6 အား ၂၄ နာရီ ပြည့်သည် အထိ စမ်းသပ် သုံးစွဲ သွား မှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ထားပါတယ်။ ထို့အပြင် IP v6 ကို စမ်းသပ် အသုံးပြုခြင်း ဖြင့် ကောင်းကျိုး များ ရရှိသွား ရန် မျှော်လင့် ထားကြောင်း ပြောကြားသွား ပါတယ်။
IP v6 သည် လက်ရှိတွင် IP နံပါတ်များ လျော့ကျလာပြီး နှစ် ပေါင်း ၃၀ ကျော် အသုံးပြုလာခဲ့ သော IP v4 များ အစား အသုံးပြုရန် လိုအပ် လျှက် ရှိပါတယ်။ လေ့လာသူများ ၏ အဆိုအရ IP v4 ၏ IP နံပါတ် ၅ ရာခိုင်နှုန်း မျှသာ နယ်မြေ အလိုက် မှတ်ပုံတင် အသုံးပြုသွား ရန် ကျန်ရှိတော့ ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ IP နံပါတ်များ အင်တာနက် ပေါ်တွင် လျော့ကျလာခြင်း ကြောင့် နောင်တွင် Network ချိတ်ဆက် ခြင်း များတွင် များစွာ အခက်အခဲ တွေ့နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး IP v4 အား ဆက်လက် အသုံးပြုသွားမည် ဆိုပါက မကြာခင် လ များ အတွင်းမှာ ပင် IP v4 ၏ လွတ်နေသော IP နံပါတ် များ အားလုံး ကုန်ဆုံး သွား နိုင်ကြောင်း ကျွမ်းကျင် သူများ မှ ဆိုထားပါတယ်။
IP v4 မှာ 32 bit အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာ နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းပေါင်း 4.3 ဘီလီယံ အထိ အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက် အသုံးပြု သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း IP v6 ၏ အားသာ ချက်မှာ 128 bit ဖြစ်ကာ ပစ္စည်းအမျိုးအစား ပေါင်း မည်မျှ ကိုမှ ကန့်သတ် ထားခြင်း မရှိပဲ Unlimited ဖြစ်ပါတယ်။
Internet Society မှ အဆိုပါနေ့တွင် အင်တာနက် အသုံးပြုသူများ ၏ 0.05 ရာခိုင်နှုန်းမှာ အင်တာနက် အသုံးပြုမှု နှေးကွေးခြင်း ကို ရင်ဆိုင်သွား နိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း ၊ IP v6 အား ပြောင်းလဲ သုံးစွဲမည့် Website များ မှ IP များ ပြောင်းလဲသုံးစွဲ ခြင်းများ ကြောင့် အင်တာနက် အသုံးပြုသူများ မှာ IP v6 အား လိုက်လံ ပြောင်းလဲသွား ပါက အဆင်ပြေစွာ သုံးစွဲ သွား နိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားထားပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့ IP v6 အား တစ်ပြိုင်နက်ထဲ ပြောင်းလဲ သုံးစွဲ သွားခြင်း အားဖြင့် Website များမှာ traffic များ ဖြစ်ပွါးသွား နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး IP v6 သုံးစွဲမည့် အထဲတွင် အကြီးဆုံး Website တစ်ခု ဖြစ်သည့် Google မှာလည်း ၄င်း၏ အဓိက လုပ်ငန်းများ ဖြစ်သော www.google.com နှင့် www.youtube.com တို့တွင် အသုံးပြု သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
Google နှင့် အပြိုင် Yahoo! မှ လည်း IP v6 အားအသုံး ပြုသွားမည် ဟု ကြော်ငြာထားပြီး Internet Society မှလည်း IP v6 အား Website များသာ မက OS များ၊ ISP များ နှင့် Hardware ထုတ်လုပ် သူများ ကိုလည်း အသုံးပြု သွားရန် တိုက်တွန်း ထားကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Posted by Peace at 3:54 PM0comments Links to this post
Myanglish သင်ခန်းစာ ပို့ချချက်
Globalization ဖြစ်စဉ်နဲ့အတူ ကမ္ဘာကြီးဟာ ရွာဖြစ်သွားပါပြီ။
ကမ္ဘာတလွှား ပြောဆို ဆက်ဆံ ကြတဲ့အခါ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားဟာ အရေးကြီးလာပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ရေမြေဒေသကို လိုက်ပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်စကား ပြောဆိုမှု ဟာ အသွင်ပြောင်းလဲသွားမှုနဲ့အတူ
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ပြောတဲ့ Inglish၊ စင်ကာပူမှာ ပြောတဲ့ Singlish၊ စသည်ဖြင့် ကွဲပြားသွားပါတယ်။
ဒီကနေ့ အစီအစဉ်မှာတော့ မြန်မာတွေပြောကြတဲ့ Myanglish ဘာသာစကား သင်ခန်းစာကို တင်ဆက် ထားပါတယ်။
Posted by Peace at 1:25 PM0comments Links to this post
Intel နှင့် Nvidia တို့ အကျိုးတူ သဘောတူ စာချုပ် ချုပ်ဆို
လက်ရှိ ကွန်ပျူတာ နည်းပညာ လောက တွင် အဓိက အစိတ်အပိုင်း မှ နေရာ ယူထားသော ကုမ္ပဏီကြီး နှစ်ခု ဖြစ်သည့် Intel နှင့် Nvidia တို့မှာ ဒေါ်လာ 1.5 ဘီလီယံ တန် သဘောတူ စာချုပ် ချုပ်ဆို လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
အဆိုပါ သဘောတူ ညီချက် အရ Intel မှ Nvidia အား ဒေါ်လာ 1.5 ဘီလီယံ ပေးဆောင်သွား မှာ ဖြစ်ကြောင်း Intel မှ တာဝန် ရှိသူများ မှ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တစ်ရပ် အတွင်း ပြောကြား သွားခဲ့ပါတယ်။
Intel မှ တာဝန် ရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်သူ Doug Melamed မှ ၄င်းတို့ အနေဖြင့် ယခုလို Graphic Card များ ကို အဓိကထုတ်လုပ် ပေးလျှက်ရှိသော Nvidia နှင့် အကျိုးတူ သဘောတူ ညီမှု ရရှိခဲ့ ခြင်း အတွက် ၀မ်းသာမိကြောင်း ကုမ္ပဏီ နှစ်ခု မှ ကြိုက်နှစ်သက် ရာ ထုတ်ကုန် များ ကိုလည်း လွတ်လပ် စွာ ထုတ်လုပ်သွား ခွင့် ရရှိလိုက် ခြင်းအား ဖြင့်လည်း နှစ်ဦး နှစ်ဖက် အကျိုးရှိသွား မှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား သွားပါတယ်။
ထိုသဘောတူ စာချုပ်ချုပ် ဆိုခြင်း အတွက် ကုမ္ပဏီ နှစ်ခု လုံးမှ ၄င်းတို့ နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန် များ အတွက် ကိုယ်ပိုင် လိုင်စင် ရရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
CPU chipsets များ နှင့် တွဲဖက်ကာ ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် Network နှင့် Storage Controller များ ကို စတင် ထုတ်လုပ်လာ လျှက်ရှိသော Nvidia မှာ မကြာသေးမီ ကာလ အတွင်းတွင် Intel အား Chipset များ အား တစ်ဦးတည်း မူပိုင် ယူထားခြင်း အတွက် မေးခွန်း ထုတ်မှုများ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ထိုကုမ္ပဏီ နှစ်ခု မှာ ၂၀၀၄ အတွင်းတွင် လည်း ယခု လို Chipset နည်းပညာများ အား မျှဝေကာ အသုံးပြု သွားရန် သဘောတူ ခဲ့ကြသော်လည်း Intel မှ စတင်ကာ Nvidia အား Intel chipset များ နှင့် တွဲဖက် ကာ Memory Controller များ တစ်ပါတည်းပါ Chipset များ အားထုတ်လုပ် ခဲ့ပြီး မှတ်ပုံတင် ခဲ့ခြင်း မရှိတဲ့ အတွက် တရားစွဲဆို ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ နည်းပညာ မှာ Intel မှ ထုတ်လုပ် ခဲ့သည့် Nehalem microprocessors များ နှင့် တစ်ပုံစံ တည်းတူညီ ခဲ့ခြင်း ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း Intel မှ ထိုစဉ် အခါတွင် ကြော်ငြာခဲ့ ပါတယ်။
ထိုအချိန်မှ စတင်ကာ Intel နှင့် Nvidia တို့ ကြား၌ တရားစွဲဆိုမှုများ အပြန် အလှန် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ယခုနောက်ဆုံး တွင်တော့ နှစ်ဦး သဘောတူ စာချုပ်ချုပ်ဆို နိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ သဘောတူညီချက်မှာ 2016 ခုနှစ် အထိ သက်တမ်း ရှိသွားမှာ ဖြစ်ပြီး Intel မှလည်း သဘောတူစာချုပ်များ ရှိခဲ့လျှက် တရားစွဲဆို ခြင်းများ ပြုလုပ် ခဲ့ခြင်းများ အတွက် Nvidia အား လျော ကြေးများ ဆက်လက် ပေးဆောင် သွားရမှာ ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Posted by Peace at 9:26 PM0comments Links to this post
Posted by Peace at 9:15 PM0comments Links to this post
Posted by Peace at 10:51 AM0comments Links to this post
Mozilla ADD-ONS များ မှ User name များ နှင့် Password များ ပေါက်ကြား
Web Browser လောက မှာ နာမည်ကြီး ပြီး အကောင်းဆုံး လို့ သတ်မှတ်ခြင်း ခံထားရ တဲ့ Mozilla Firefox မှာ ယခုတော့ လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ ပြသာနာ များ နဲ့ ကြုံတွေ့ နေရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်ပုံမှာ မကြာသေးမီ ရက်ပိုင်း အတွင်း Mozilla ၏ addons.mozilla.org တွင် Register ပြုလုပ်ထားပြီး အချိန်ကြာ မြင့်စွာ အသုံးပြုခြင်း မရှိသော လူများ ရဲ့ Username နှင့် Password များ ဟာ လူတကာ မြင်နိုင်တဲ့ Web Server တစ်ခု ပေါ်မှာ အထင်းသား ဖော်ပြ ခြင်းခံ ထားရတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ အသုံးပြုသူဦးရေ 44,000 ကျော် ရဲ့Username များ နှင့် Password များ ဟာ encrypted လုပ်ထား ပြီးသား ဖြစ်နေပြီး အဆိုပါ Database မှ Download လုပ်ခဲ့သော account များလည်း ပါဝင်ကြောင်း Mozilla ရဲ့ တာဝန် ရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Chris Lyon မှ ၄င်း၏ Blog မှ တင်ပြသွား ပါတယ်။
လက်ရှိ addons.mozilla.org ကို အသုံးပြုနေသူများ ရဲ့ account များ ကတော့ Mozilla မှ Password encrypted လုပ်မှု ကို 2009 ခုနှစ် May လပိုင်းမှာ Upgrade ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အကျိုးကျေးဇူး ကြောင့် အဆိုပါ ပြသာနာ များကို ရင်ဆိုင်ရတော့ မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Mozilla မှ လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ တာဝန် ရှိသူများ မှ အဆိုပါ ဖြစ်ရပ် ကို December 17 ရက်နေ့တွင် ကြေငြာ မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ Bugs များ ကို ဖြေရှင်းပေး နိုင်မယ့် Volunteer များ ကိုလည်း ဖိတ်ခေါ် လျှက် ရှိနေပါတယ်။
ယခု ဖြစ်ပွါးခဲ့သော လုံခြုံရေး ပြသာနာ ကို Mozilla မှ December 27 တွင် အတည်ပြု ကြော်ငြာ ခဲ့ပြီး addions.mozilla.org ရဲ့ အကောင့် ပိုင်ရှင်များ သို့ထံလည်း e-mail ပို့ကာ ဆက်သွယ် ထားကြောင်း တင်ပြပေး လိုက်ရပါတယ်။
Posted by Peace at 10:45 AM0comments Links to this post
ကွန်ပျူတာများ အတွက် Kinect လာ တော့မည်
3D နည်းပညာ ဖြင့် မိမိ လှုပ်ရှားမှု အတိုင်း မြင်နေရသော Kinect နည်းပညာ ကို Microsoft က မပိုင်ဆိုင်ဘူး ဆိုတာ လူအများ မှ သိချင်မှ သိပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Kinect နည်းပညာကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထုတ်လုပ် နေသော ကုမ္ပဏီ အား PrimeSense ဟု ခေါ်ပြီး အစ္စရေး နိုင်ငံ မှာ တည်ရှိ ပါတယ်။ ထိုကုမ္ပဏီ ဟာ ၂၀၀၅ ခုနှစ် မှ စတင် တည်ရှိ ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့ ၄င်း အား ကမ္ဘာပေါ်တွင် 3D Digital ဖြင့် မြင်နိုင် ၊ လှုပ်ရှား နိုင်သော ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ် နေသော ကုမ္ပဏီ ဟု ကြော်ငြာခဲ့ ပါတယ်။
သိပ်မကြာသေးခင် ကာလ မှာတော့ ၄င်းတို့ဟာ ကွန်ပျူတာ များတွင် အသုံးပြုနိုင်မည့် Kinect ထုတ်ကုန် များ ကို ထုတ်လုပ် သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း ကြော်ငြာခဲ့ ပါတယ်။
ယခင် နှစ် အတွင်း PrimeSense မှာ Mircrosoft ၏ Xbox 360 အတွက် Kinect ထုတ်ကုန် များ ကို ထုတ်လုပ် ပေးခဲ့တဲ့ အတွက် လူအများမှ ကွန်ပျူတာများ ပေါ်တွင် နောက်ထပ် ထုတ်လုပ် ပေးမည့် Kinect မှာ Microsoft မှ သာ ထုတ်လုပ် မည် ဟု ထင်မှတ် လျှက် ရှိနေကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း ထူးခြား ချက် ကတော့ ပြိုင်ဘက် ASUS တံဆိပ် နှင့် PrimeSense မှ ကွန်ပျူတာ များ အတွက် Kinect အား အဓိက ထုတ်လုပ် သွားမည် ဟု ကြော်ငြာ ခဲ့ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ASUS တံဆိပ် နှင့် ထုတ်လုပ် မည့် Kinect အတွင်း Wireless စနစ် ပါဝင် သွားမှာ ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ Device ၏ နာမည် ကိုလည်း ထူးခြားစွာ ခေါ်ရခက်သော WAVI Xtion လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။
၄င်း WAVI Xtion နှင့် တွဲဖက် ထွက်ရှိလာမည့် Application ကိုတော့ Xtion PRO ဟု ခေါ်ပြီး ၄င်းမှာ ကွန်ပျူတာ ပေါ်တွင် 3D နည်းပညာ ဖြင့် ပတ်သက်ကာ Xbox 360 ပေါ်တွင် Kinect လုပ်ဆောင်ပုံ နည်းတူ ပြုလုပ်ပေးမယ့် Software ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ PrimeSense နှင့် ASUS တို့မှာ Xtion အတွက် Online Application Store ကို ပင် ပြုလုပ်ရန် ပြင် ဆင်ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ယခု လောလောဆယ် မှာတော့ လူအများ မှ Microsoft မှ ကြော်ငြာခဲ့သည့် PC များအတွက် Microsoft Kinect ကို မေးခွန်းထုတ်နေပြီး အဓိက မှာ တော့ Microsoft နှင့် PrimeSense တို့၏ သဘောတူညီမှုမှာ Xbox360 တွင် သာ ရပ်တန့်သွား နိုင်ခြင်း နှင့် PrimeSense ၏ WAVI Xtion မှာ အရင်ကာလ များထဲက PC များ ပေါ်တွင် ထုတ်လုပ် သွား ရန် သဘောတူ ညီ ထားခြင်း ရှိမရှိ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး ရ သတင်း များ ကတော့ WAVI Xtion အား 2011 ခုနှစ်လယ် ပိုင်းတွင် ထုတ်လုပ်သွားမည် ဟု ကြော်ငြာ ထားပြီး Application ဖြစ်သော Xtion PRO ကိုတော့ လာမည့် လ အတွင်း ရရှိ သုံးစွဲ သွား နိုင်တော့ မှာ ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြ လိုက်ရပါတယ်
Posted by Peace at 10:41 AM0comments Links to this post